एमाले फर्कंदा सन्तुष्टि मिल्योः विजय सुब्बा - Himalkhabar.com
अन्तर्वार्ता/विचारआइतबार, भाद्र ८, २०७१
एमाले फर्कंदा सन्तुष्टि मिल्योः विजय सुब्बा
२९ साउनमा संघीय समाजवादी पार्टी त्यागेर नेकपा एमालेमा फर्केका विजय सुब्बासँग गरिएको कुराकानीः
अहिले नै एमाले फर्किनुको कारण के हो ?
भइरहेका भन्दा जुझाारु, मुद्दामा स्पष्ट र पारदर्शी पार्टी बनाउने उद्देश्य पूरा भएन । नयाँ पार्टीमा जातिवादीको आरोप लगाएर एक्लो पारियो । फरक मत राखेर बस्ने भए एमालेमै फर्कनु उचित हुने ठानेर फर्केको हुँ । संघीय गठन गर्नुभन्दा पहिले जति जनजातिहरूबाट रेस्पोन्स पनि आएन ।
मुद्दामा सहमति भएर भन्दा पनि संघीय समाजवादीबाट थाकेर एमालेमा प्रवेश गरेजस्तो देखियो नि ?
थाकेर त नभनौं । तर २० महीना संघीयको उपाध्यक्ष हुँदा मैले कहिल्यै आनन्द अनुभूत गर्न सकिनँ । बरु एमालेमै फर्केपछि सन्तुष्टि मिल्यो । एमालेको सकारात्मक पक्ष भनेको यसले समय अनुसार मुद्दा क्यास गर्न सक्दछ । नवौं महाधिवेशनबाट पनि मधेशी, जनजाति र महिलालाई ल्याइएको छ ।
तपाईंहरुले पहिले उठाएका मुद्दा अब राजनीतिको केन्द्रमा आउलान् कि नआउलान् ?
एकल पहिचान सहितको मुद्दा संघीय समाजवादीले बोलेको मात्रै हो । बहुल पहिचान र एकल पहिचानबीच त्यत्रो भिन्नता पनि छैन । समावेशी लोकतन्त्र चाहिएको हो । नाम जे राखे पनि सबैलाई चाहिएको अधिकार हो । तसर्थ प्रदेशको नामको पछाडि लाग्नुहुँदैन ।
एमालेमा आफ्नो भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
पार्टी प्रवेश गर्नुअघि एमाले नेताहरूसँग पहिलाकै जिम्मेवारीमा व्यवस्थापन गर्ने कुरा भएको छ । अरुले आरोप लगाए जसरी अवसर वा लाभको कुरा भएको हैन । मेरा लागि नवौं महाविधेशनको रेल भने छुटेकै हो ।
संघीय समाजवादीको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
मैले छाडेर आए पनि त्यो पार्टीको भविष्य उज्ज्वल रहोस् भन्ने चाहन्छु । तर, म त्यहाँ हुँदा जस्तै हुने हो भने त्यसको भविष्य छैन ।